Pano tichatarisana zvose Testosterone Propionate (CAS 57-85-2) uye Testosterone Enanthate (CAS 315-37-7). Nyaya iyi ichazarura pfungwa dzako uye ichakubatsira pakufananidza Testosterone Enanthate kubatsira uye Testosterone Propionate inobatsira. Uyewo, kana iwe uchida kuverenga chaizvo Test e vs Ongorora Kuongorora kuongorora, saka iyi ndiyo nzvimbo inofanira kuva. Hapana chikonzero chekuedza nzira nekukanganisa apo iwe uchida kutenga Testosterone Enanthate online, tichakuudza iwe zvakanakisisa Testosterone Propionate mutengesi kuitira kuti iwe uwane zvigadzirwa zvakanakisisa zvichakupa iwe nemigumisiro yakanaka.
Hazvina mhosva kuti muviri wako chinangwa chei, unoda rubatsiro rwakawedzerwa kukubatsira kuti uite zvauri kuda. Ungave uchida kuderedza uremu, uwane humwe hukuru kana kuvandudza pane simba rako, kune steroid huru inokupa muviri wako wakanaka. Asi iwe unosarudza sei zvakanakisisa kwauri? Muchikamu chino, ini ndichaenda kutsvaga kwako kusununguka uye ndikuudze nezve steroid dzakavonekwa dzinokosha pakuzadzisa zvinangwa zvemuviri wako, uye iwe unogona kusarudza chimwe chezvinhu zviviri zvakakosha iwe.
1. Chii chinonzi Testosterone Enanthate? Chinoshanda sei?
Testosterone Enanthate (315-37-7) inonzi steroid inonyanyozivikanwa iyo inowanzobatwa pasi pemazita akawanda emabhizi anosanganisira Testro, Testoviron, Testostroval, Testrin, Testanova, Testanon, Sustrone, Everone, Duranate, Depandro, Cernos, Andropository, Androfil, uye Delatestryl. Iro andro genic uye anabolic steroid inoshandiswa mukurapa mazinga epasi e testosterone. Zvinorevei ndezvokuti zvinogona kushandiswa kune zvose kusimba kwemisimba uye nekuwedzera kwehukama hwepabonde. Inoita izvi kuburikidza nekushandurwa kwe Testosterone iyo inogona kuva yakaderera mumuviri.
Nhasi vazhinji vemuviri vemuviri vari kushandisa steroid iyi mukukurumidza kupora, kupisa mafuta uye mukuvakwa kwemasumbu. Chinoita kuti chizikanwe kubudirira kwayo kune avo vanoishandisa vanozvitora pachavo kana kuti vanozviisa mu steroid yavo stacking. Pamusana pezvinhu zvayo anabolic, inokwana zvose zvinokonzera kuvhara nekucheka. Zvose izvi zvinoita kuti zvive zvaidiwa kune avo vose vanoda kutakura misumbu.
Iwe unogona kunge uchishamisika kuti zita rei rokuti 'rondedzere' shure kwezita rokuti testosterone zvinoreva. Ndiyo ester ine chisungo chakabatanidzwa neTesttosterone uye inotsanangura chiyero iyo hormone inobudiswa mumuviri. Sustanon 250 Mashandisiro, Nhanho, Nhamba, Zvipo, Mazano
Iyo kabhoni yaketani yakabatanidzwa nemamokoro e testosterone ndiyo inonzi se esters. Iko kushandiswa kwechirwere kunotsanangurwa nekureba kwenguva yaketani ester chii. Iyo yakareba ketani, iyo isinganyanyi kusunguka uye pamwe chete.
2. Chii chinonzi Testosterone Propionate? Chinoshanda sei?
Testosterone Propionate (57-85-2) is steroid anabolic iyo inotengeswa pasi pemazita emhando dzakasiyana kusanganisira Testoviron. Icho chinononoka kusunungura steroid ine chine hafu yeupenyu. Iyi pfuma chaiyo ndiyo inoita kuti ishandiswe nevaya vanoda kutsvaga maitiro mashoma pakati pevhiki masere kusvika gumi.
Kutevera kusunungurwa kwe Testosterone esters mu1936 kokutanga, Testosterone Propionate yakawanikwa iine simba uye yakasarudzwa kuti iwedzere mberi. Pakutanga, zvakanzi kune dzimwe nzira dzokurapa dzakadai sevarume uyerogen kusakwanira, uye zvimwe zvinhu zvose zvakabatwa nematunhu epasi e testosterone zvakadai sokushaya simba kune vanhu vakuru, kuderedzwa kwepabonde nekristptorchidism; mamiriro ayo mapiritsi asingaburuki muve vaduku nevechiri kuyaruka. Zvimwe kunze kwekuti zvinoshandiswawo mukurapa kwemaorrhagia (kurema kunonoka kwemwedzi), kuenda kumwedzi, chronic cystic mastitis (fibrocystic mazamu), kumanikidzwa kwemwedzi, kunyanya kukwana, uye endometriosis.
3. Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate yekucheka
Testosterone Enanthate yekucheka
Testosterone Enanthate inoshandiswawo kucheka kunyange zvazvo aromatase inhibitor inoshandiswa kudzivisa kubvisa uye kuchengetedza mvura. Kana chinangwa chako chiri kurasikirwa nemafuta kana kuti pane kucheka, haufaniri kutora chikwata chakakura che steroid iyi kubva pane zvishoma zvayo zvinopfuura zvakakwana mukuchengetedza musero wemasero.
E / EOD Kuongorora Kuongorora / EOD Equipoise / EOD Trenbo
Rol / ED Maste
Ron / EOD HGH Arimidex
Testosterone Propionate yekucheka
Inoshandiswa panguva yekugadzirisa chirongwa chekuita kuti munhu arege kurasikirwa nemasisita mashoma. Dhiyo yaro inogadziriswa kusangana nezvinangwa zvako. Hezvino iwe unogona kuitora sei panguva yekucheka kwako;
Vhiki Edzai Propionate kune rimwe zuva rimwe zuva Trenbolone Acetate rimwe zuva rimwe nerimwe Masteron
Per rimwe zuva rimwe nerimwe HGH (kusarudza)
Zuva nezuva Arimidex
Per rimwe zuva rimwe nerimwe
4. Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate yekubvisa
Testosterone Enanthate nokuda kwekubvuta
Vhiki Testosterone Enanthate
Testosterone Propionate nokuda kwekudzivirira
Mavhiki Kuongorora Kuongorora / EOD Nandrolone / EOD Anadrol Per day HGH
5. Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate ye stacking
Testosterone Enanthate nokuda kwekuvhara
Testosterone Enanthate is steroid yakashandura nokuti inogona kuiswa kana kushandiswa yoga kuti ipe migumisiro yaunoda. Iyo inogona kuiswa pamwe nemamwe akawanda steroid uye yakanyoresa zvakanyanya kwazvo kubudirira kwehuwandu. A 500mg mwedzi wevhiki weTesttosterone Enanthate inogona kushandiswa nevatangi vevhiki gumi uye kupa mitezo yakaisvonaka. Kana uri wepamusoro, unogona kuenda ku500-1000mg kwemavhiki gumi kuti uwane mhinduro dzakajeka. Avo avo vanoshandiswa kuisa stacking kuitora iyo neCaa-Durabolin, Dianabol, Equipoise kana Primobolan kupa simba rine simba rekuvaka mashoma. Kusiyana Kwakaipisisa Pakati Pekuedzwa Kuyananisira uye Kuedzwa Tsitsi
Testosterone Propionate ye stacking
Kubatsira kunouya ne steroid iyi ndechokuti inogona kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana maererano nechinangwa chako kana chinangwa. Iyo inowirirana nechose chinokwana mamwe anabolic steroid, uye zvakanakisisa kuidzika iyo nevaya vane hafu yehupenyu hupfupi. Izvo, zvisinei, hazvirevi kuti iwe urege kuzviisa pasi neesters yakasungirirwa kwenguva yakareba seBoldenone Undecylenate uye Nandrolone Decanoate. Dambudziko rekuita izvozvo richava kusanganisa kwakakonzerwa panguva yekutonga. Testosterone Propionate (57-85-2) inogona kuda nguva dzose kutungamira apo iyo esters yakareba ingangoda kugoverwa kaviri vhiki nevhiki.
Sezvo Testosterone ine shoma shoma-hupenyu, inogona kubvumira mumwe kuiisa pamwe nedzimwe steroid muhupenyu huri shoma semavhiki matanhatu. Iyo ine yepamusoro yemafuta, uye iwe unofanirwa, saka, unofanira kutora zvinodhaka zvinodhaka seClomid kana Nolvadex kudzivirira gynecomastia kuti irege kuitika.
6. Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate cycle
Tine zvakawanda zvakasiyana-siyana izvo munhu angasarudza kubva uye pano ndezvienzaniso zve bvunzo e vs Test prop cycles.
Vhiki Deca Durabolin
Purogiramu Testosterone Enanthate
Vhiki Testosterone Propionate paEOD Dianabol per ED Arimidex
Imwe muenzaniso wekufamba uku ndeye;
Vhiki Testosterone Propionate paEOD Anavar kuri ED Arimidex neEOD
7. Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate dosage
Muedzo e vs Test test mhosho yakasiyana nezvekuti inguva yakawanda inopihwa mumuviri. Chiyero chinotarisirwa hachisi chakasiyana zvakasiyana uye pano ndicho chiyero chakanaka uye nguva ye steroid mbiri.
Testosterone Enanthate ane hafu yehupenyu hupenyu uye naizvozvo inongoda kupiwa kaviri pavhiki, uye majekiseni akapararira zvakafanana mukati mevhiki. Somuenzaniso, iwe unogona kusarudza kupa mutengo wakafanana neMuvhuro neChishanu wevhiki rese. Kunyange zvazvo vamwe vanhu vangasarudza kuitungamirira kamwechete pavhiki, hazvina kuchenjera sezvo zvingakonzera kusagadzirisa mhinduro kune zvayo.
Doses inobva ku 300-500mg vhiki imwe neimwe uye inogona kubva kune 150-250 nejovo. Kune avo vanosarudza kutora maitiro akareba kusvika ku600-1000mg kwevhiki, asi iwe unofanirwa kunyatsoudzwa kuti ungadzivisa sei zvinetso zvinenge zvaitika.
Kana iwe uchida kuvandudza pane muviri wako nekushanda, iwe unorayirwa kuti utore dheji yakakodzera ye Testosterone Propionate kakawanda. Kuti uve wekutanga, iwe unofanira kutora dhiyo inokwana 300-500 mg vhiki imwe neimwe, uye izvi zvinogona kuva 75-125mg pamazuva aunosarudza kuva nechijojo. 300mg inogona kunge yakanzwika sediki shoma, asi ichakupa kuvandudza kunoshamisa pamuviri munhau masimba uye muviri.
Kune vashandisi vari pakati, muyero we500-700 mg vhiki imwe neimwe inorudzirwa. Iyo inoshandura ku 125-175mg mumazuva amunosarudza kuva nejojo. Vakawanda vari pakati vanosarudza kushandisa dhigirii yakakwirira, asi hazviiti misiyano yakakura chero bedzi iwe uchitarisa kudya kwaunoita uye enda kumisangano yako yekudzidzisa kunyange nehana duku.
Vashandisi vakakurudzira vanoshandisa zvakadzama se 700-1000mg vhiki imwe neimwe iyo isingafaniri kudarika 175-250mg dhidhi muzuva. Izvo, zvakadaro, zvinokosha kuti iwe ucherechere kuti mizinga yakakura haigone kukupa mhinduro yakanakisisa asi inogona kuwedzera kukura kwezvinhu uye inokuita kuti utambure kubva pamigumisiro yakakomba.
8. Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate mhinduro
Testosterone Enanthate migumisiro
Sezvo Testosterone Enanthate ndechimwe chevana anabolic steroid yakasimba mumusika, unogona kutanga kuona zvimwe shanduko mushure mokunge injini yokutanga. Chetetesterone yakadzika maziso zviratidzo ndezokutanga kupera, uye iwe unganzwa sokuti wakagadziriswa, kuva nechivimbo chakanyanya, uye unofanirwa kujekesa mupfungwa kupfuura iwe wakamboita.
Sezvo Testosterone Enanthate iri steroid yakasiyana-siyana uye inogona kushandiswa kwekucheka uye kubvongodza, vatambi uye miviri inogona kuvandudza pakutsungirira kwavo, simba uye musimba wavo zvakare. Izvo, zvakadaro, zvinoenderana nezvamunodya uye kuti unodzidzisa zvakadini kuti uite zvinangwa zvemuviri wako zvaunoda. Boldenone Undecylenate (Kushanda) Zvishandiso, Purogiramu, Kuyera, Kucheka, Kudhinda
Mumwedzi mitatu muiti wemagetsi anogona kuwana 30-50 mapaundi, uye kamwechete paanomisa steroid, anogona kukanganisa 10-15 pounds. Izvozvo hazvifaniri kukunetsa iwe sezvo maronda anowedzera.
Testosterone Propionate migumisiro
Testosterone Propionate inopa migumisiro yakanakisisa yevaya vanotambura nechepasi testosterone mazinga sezvo zvichibatsira pakuchinja zviratidzo zvayo. Zvimwe zvezviratidzo izvi zvinosanganisira kuvhara pasi; kurara kunetseka, kuwedzerwa chisimba pakati pevamwe. Uyewo, kana uri kutora ichi nechinangwa chekuvaka pamisungo, unogona kutarisira kuwana pfumi gumi pakureba.
Nekucheka, zvinotonyanya kukosha nokuti inobatsira mukuchengetedza mishonga yakawanikwa munguva yekukanda.
9. Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate madhara
Testosterone Enanthate madhara
Kana chinangwa chako chekutora Testosterone Enanthate ndechekusimudzira kushanda kana kutambira mitambo, iwe unogona kuva nechokwadi chokuti Testosterone Enanthate inobatsira zvakangofanana neavo vanotsvaka kurapwa kwemazinga epasi e testosterone. Hazvisi chakavanzika chokuti steroid ino inoshamisa ichachinja mararamiro ako epabonde, mumuviri uye mupfungwa kunze kwezvaunotarisira. Uyewo, kubatsiridza-kubatsiridza kunotanga kuratidza apo maitiro ako e testosterone akakura kusvika pamusoro pe "tsika".
Neyi steroid, iwe uchange uine kuwedzera kwemazinga ako e testosterone kupfuura izvo muviri wako wakambogadzira munguva yapfuura. Somugumisiro, iwe uchazoona kuchinja kwakawanda mumuviri wako uyewo zvepabonde uye pfungwa dzako. Heano mamwe emigumisiro iyo Testosterone Enanthate ine mumuviri wako;
Zvichida wakanzwa kuti mapuroteni anokosha zvikuru pakuvaka musumisi tumu. Icho chinhu chakakosha mumuviri wose wechipfuva, uye chikonzero cheizvi ndechokuti, mukugadzirwa kwemasukisi, inoshanda sechivakwa chekuvaka. Mienzaniso yemaviri emumuviri akavakwa uye akawanda ayo anotungamirira kukura kwemisumbu ndeyezviputi, mapfupa, misumari, vhudzi, ganda, uye enzymes.
Kutora mukana wakakwana weTesttosterone Enanthate kuchawedzera chiyero apo muviri wako unogadzira mapuroteni. Mamwe masero emuviri wako achakwanisa kubereka mapuroteni akawanda kupfuura aya akamboita nekudaro iwe uchibvumira kuti utakure misumbu yakawanda kupfuura yawaimbofungidzira. Inonzwika zvakare, zvakanaka?
Kunyange zviri nani, iwe uchacherechedza mamwe mabasa anabolic mumuviri wako kupfuura iwe wakamboita. Iyo inonyanya kukosha kune avo vanoita zvinetso zvakaoma nokuti hausisirizve imbwa yakaneta mushure mekuita zvekuita maitiro. Mumuviri wako uchakwanisa kugadzirisa masisitiki nyore nyore. Nenguva isipi iwe uchakwanisa kuita izvo zvidzidzo zvinokusiya wakaneta nguva nenguva uye nekukurumidza sezvaunoda. Iwe uchange uinewo huwandu hwemasangano ako ekudzidzira.
Vachida kufara, vashandi, uye vatambi vanoda kuwedzera musimba wavo kukura uye nguva yekudzikinura vachaziva kuti iyi steroid yemashiripiti inoita sei mumuviri. Ichokwadi kuti 60-70% yeproteni yevanhu yose inowanikwa mumusungo ndeye chikonzero chakanaka chekuti mapuroteni anoita muviri wakawanda mumuviri.
Kuvandudza nitrogen kuchengetedza
Inogona kunge yakaita sehurukuro kune vamwe vadzidzisi vemitambo kana kuti vatambi, asi iwe uchadzidza kuti kana uine zvakawanda zvekuchengetedza nitrogen, misimba yako inokura. Nitrogen is a chemical element inowanzowanikwa muprotini. Sezvakakurukurwa pepakutanga, mapuroteni anoita basa rinokosha mukukura kwemisumbu. Kuti muviri wako uwedzere hutema huzhinji, muviri wako unofanirwa kuva neprotheni yakawanda kupfuura iyo inoshandisa zvimwe zvinogona kuita kuti ugone kupera ure panzvimbo yekuwana. Zvitatu zvitatu zve nitrogen zvakaringana zvinogona kuitika mumuviri izvo;
Chinhu chakanakisisa-Iyi ndiyo nyika umo kune huwandu hwekukura kwemisimba sezvo kune nitrogen yakawanda inowedzera kupfuura yakabuda. Izvi zvinoratidza kuti muviri wakagadziriswa nenzira inogutsa kubva pakugadzirisa kwekupedzisira. Iyo yakakwirira iyo nitrogen balance, iyo inokurumidza muviri unogona kukwanisa kubvazve kubva kunotyisa zvidzidzo zvemasangano. Uyewo, ino inomhanya inokurumidza kupindirana kweprotini. Izvo zviri nani kuzivikanwa se "anabolic" yomuviri.
Negative- Iyi ndiyo mamiriro ezvinhu ekuti munhu wese anofanira kutyisa kuzviwana. I nitrogen inotorwa mukati isingapfuuri ne nitrogen yakarasika uye izvi zvinouya nemigumisiro yakaipa. Nitrogen yakasvibiswa kubva mumisungo iyo inokosha pamasimba ekukura uye kutakurwa kune nhengo dzomuviri dzinokosha umo kukuvadzwa kwakanyanya kunogona kuitika. A negative nitrogen balance haisi iyo yakanakisisa yekusimudza musimba sezvo inotungamirira pakuparadzwa kwavo uye naizvozvo inozivikanwawo sechikwata chenyika.
Kuenzanisa- Icho chinhu chisingawanzwisisiki apo zvose nitrogen kudya uye kurasikirwa zvakaenzana. Panguva ino, mudzidzisi haasi kurwisa kana kuwana chero huwandu huzhinji hwemutsvina.
Testosterone Enanthate (315-37-7) inopa mamwe nitrogen kuchengetedza, uye naizvozvo muviri wako uchava munharaunda yevanabolic saka inofanirwa kuwedzera kukura kwemisumbu. Iwe haufaniri kushushikana kuti iwe unogona kurasikirwa nemisumbu yawave uchishanda masikati neusiku; kushandiswa kwe steroid iyi kuchaita kuti misipa yako irege 'kudyiwa' uye kuwedzera muhukuru.
Kuwedzera mumasero matsvuku eropa mumuviri
Masero matsvuku eropa ane mabasa mazhinji mumuviri, asi chinonyanya kukosha pakuvakwa kwemasumbu ndechekuti inokonzera miviri, masukisi, uye masero ari kugadzirwa kana kuvaka zvakare. Panguva imwecheteyo, inowedzera nguva yekudzikinura nekudaro ichikubvumira kuti udzidziswe zvakare munguva pfupi.
Kutora Testosterone Enanthate, saka, inokurudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa saka kuwedzera pakutsungirira kwako uye kuvandudza nguva yako yekudzikinura.
Kuvandudza IGF-1 Kubudirira
Iyo iprotheni hormone inobudiswa muchiropa. Inotsanangurwa se peptide hormone uye inobatsira vanabolic effect pamuviri. Uyezve, inokonzera kugadzirwa kwemasero mumuviri.
Iwe uchada chokwadi chokuti iyi hormone inobatanidza zvakananga nekugadzirwa kweHuman Growth Hormone (HGH). Kuwedzera kweGG-1 kubudisa kunoita kuti kuwedzere pakugadzirwa kweHGH. Bhonasi iyo inouya neiyi ndeyokuti muviri unokwanisa ikozvino kupora uye kuporesa nekukurumidza nekusimudzira kukura kwemisumbu iyo yakakura uye yakasimba munguva pfupi.
Zvishoma nezvishoma kugadzirwa kweglucocorticoids
Idzo mahomoni ane makemoni anobudiswa mumuviri. Mamiriro avo ehurumende anovabvumira kuparadza mishonga yemasumbu uye saka vanoita zvakasarudzwa pamusoro pechivakwa chemasimba nekurasikirwa. Cortisol ndeimwe yehomoni idzi, uye kana ikakonzerwa nekugadzirisa, iwe unogona kutakura mapaundi akawanda sezvaunoshuva.
Kuita zvepabonde yakakwirira
Munhu wese anoda kuve nekufambisa zvakanaka zvepabonde zvinogona kugutsa shamwari yavo, naizvozvo mishonga iyi chikomborero kune munhu wose anotora.
Testosterone Propionate madhara
Migumisiro ye Testosterone Propionate (57-85-2) inenge yakafanana neyeTesttosterone Enanthate.
Inowedzera musimba musimba uye simba kuburikidza nekuwedzera kwekugadzirwa kweIgf-1 uye nokuchengetedzwa kwe nitrogen.
Iko kune kuwedzera kwe libido uye mbeu yekubudisa.
Pane kuderedzwa kwehutano hwekutambura kubva ku coronary uye ischemic heart disease.
Inopisa mafuta kuburikidza nekuwedzera kwemaitiro emagetsi.
Kuwedzera mufupa remaminera emagetsi
Inokurudzira kuonda kwemisimba uye musimba kuburikidza nekutanga kweprotini.
Iko kuwedzerwa kwekufunga kwebasa uye muyeuchidzo.
Mafungiro ako anonzwa achisimudzirwa.
Inogadzirisa kubudiswa kwehomoni yeglucocorticoid, kureva, cortisol.
10. Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate madhara
Kunetseka kunzwa kana kupera
Kuzvimba kwezamu muvarume
Nechido chakatapudzwa kana chichiwedzera mune zvepabonde
Kuchinja kweganda reganda
Vakadzi vari paTesttosterone Enanthate vanogona kutambura nemigumisiro inotevera;
Kuwedzera kwe clitoris
Mhando dzebvudzi dzekubata kukura, semuenzaniso, pachifuva uye chinangwa
Kuchinja panguva yekuenda kumwedzi
Kana ukaona chimwe chezviitiko zvinotevera, tapota taura nechiremba wako.
Kusava nemwoyo kana kutsanya mwoyo
Kufugama kwetsoka, maziso kana maoko
Chirwere chinokonzera chiropa chinoratidza zviratidzo zvakadai semumvuri werima, kusvibira kweganda nemaziso, kuneta kusina kujairika uye kurwadziwa kunoramba kuripo uye kurwadziwa mumimba.
Maitiro kana kuchinja kwepfungwa sekukurira kukuru, psychosis, uye paranoia
Paunenge uchironga kutora chero mishonga, iwe unoda kutaura nachiremba wako pamusoro pemimwe mishonga inenge uripo kana kuti uri kuronga kutanga kutora. Chikonzero cheizvi ndechokuti vanogona kutaurirana nemishonga yaunoda kutora uye inokonzera kukanganisa kwakanyanya kana kuita kuti kurapwa kusashanda zvakanaka. Zvingaitwa nachiremba ndezvokugadziriswa kwemuti wemishonga yawave uri kutora kana kuitora. Heano zvimwe zveTesttosterone Enanthate (315-37-7) kuwirirana;
Corticosteroids- Kubatanidzwa kwemishonga iyi uye Testosterone Enanthate inofanira kutorwa nehuwandu hweuchenjeri kune avo vari kutambura nechiropa, repfungwa uye chirwere chemwoyo. Imwe yatorwa pamwe chete, inogona kukonzera njodzi yakawanda yekutambura kubva ku congestive mwoyo kusakona uye kuchengetedza kwemvura kunonziwo edema.
Dhiyabhorosi zvinodhaka- Kune ani zvake ane chirwere cheshuga, muyero hwavo hunofanira kuchinjwa. Izvi ndezvokuti steroid iyi inotungamirira kuderera kwezvose shuga nehuga muropa mumuviri.
Anticoagulants, iyo inopa ropa yakashandiswa mukurapa ropa, kureva, warfarin. Testosterone inowedzera basa iri remishonga rinokonzera njodzi yekubuda ropa zvakanyanya.
Kuramba kazhinji kunokonzerwa nekuputika kwemakumbo
Kusavapo kwemwedzi nguva
Zvisina kukodzera migumisiro
Kugadzirisa kwenguva pfupi mutsi uye chiso
Kuwedzerwa njodzi yekubuda ropa
High mazinga e calcium muropa
Nhamba yakawandisa yebvudzi rekubudisa
Kushaya kukwanisa kuve nekugadzirwa
Kupera mu testicle ukuru
Dambudziko rekusingaperi panguva yokurara
Kuchinja kunoshandiswa pakuita zvepabonde
Kazhinji migumisiro yakaipa
Zvinyorwa zviduku zvinokonzerwa neropa zvinoonekwa muchiropa
Chiropa mhuka dzorufu rufu
Hepatitis inokonzerwa nemishonga
Mashoma masero eropa mumuviri
Kuvhara ropa mukati memvura yakadzika yemigumo
Kuita ropa revhapiti mumaketeni
Kuwedzera kusinganzwisisiki kwehuwandu hwemasero matsvuku eropa mumuviri.
Kunzwa kutsamwa pane chimwe chinhu
Akatsamwa kana kutsamwa
Inobatanidza nemishonga inotevera;
11. Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate kuongorora
Kana uri kufa kuti uve mukuru kana kutema pane uremu, iwe unogona kunge uchida kuverenga kuongororwa pamusoro pevanhu vakabudirira kushandisa steroid mbiri pamwe pamwe nekuona kwezvavakawana. Nokudaro, iwe uchakwanisa kuenzanisa iyo migumisiro ye Test e vs. Test cyp uye sarudza chisarudzo.
Testosterone Enanthate mazano
Li Jie anoti "Ndakange ndiri pane gumi nemaviri-vhiki uye zvinobudirira zvinoonekwa. Ndinogona kutaura kuti ndakanakidzwa kushandisa chigadzirwa ichi. Munguva yakapfuura, ndaedza dzimwe Testosterone steroids, asi hapana akapa mhinduro huru iyo iyi ine. Zvimwe zvinogona kuita kuti muviri wangu utambure kubva pamigumisiro yakakomba, asi iyi inopa musimba chaiyo pasina kuita kuti mumwe anotambura nehutano hwakaipa. Izvo zvisingasviki zvakakwana, uye ini ndaizokurudzira kune chero upi zvake wekuvaka kunze uko. "
Yan anoti "Ndave ndiri pamushonga uyu kwepedyo mwedzi uye wow! Ndizvo zvandaida. My sex drive drive yashandura kubva pakushaya. Upenyu hwangu hwepabonde hwakachinja zvachose, uye ndinonzwa ndakagadziriswa kupfuura kare. Aya injections akaita zvishamiso, uye ndaizovapa 10 / 10 "
Chiremba Wang Min anoti "Kubudirira kwechirongwa ichi steroid inoda kusvika 98% uye izvi zvinorumbidzwa zvikuru. Kune vose varwere vandakakurudzira kushandisa izvi kuti vawedzere libido yavo, vanenge vese vadzoka nemabudiro ekubudirira. Sechiremba, ndakachera zvakadzama pamigumisiro yaro, uye ini ndinogona kuzvipupurira kuti ivo vanogona kunyatsokwanisa. Kuna ani zvake akashandisa zvakawanda zvepfuma yavo achiedza kugadzirisa pikicha ye libido, izvi ndezvako. "
Li Qiang inoti "Iri rinofanirwa nemari yose yaunopedza nayo. Iyo inoshanda zvikuru mukukura kwemisimba, uye ini ndiri kufara kwazvo nemigumisiro. Iyo inopa zvose zvinopikira! "
Wang Li anoti "Iwe haungatendi kuti ndinogona kuita 100 squats, 50 kusimudza ups, cardio, nekufa kwevose muchitsauko chimwe chete pasina kutambura kuneta. Sezvo ndakatanga kushandisa steroid iyi, handisi kunyanya kuneta uye kana ndikazviita haisi nguva refu. Yakandibatsira kuti ndibate basa nguva dzose sezvandinofarira uye somugumisiro, mazamu angu aripo. Zviruno zvangu uye mazamu ava ikozvino purogiramu kuonga steroid iyi. "
Testosterone Propionate kuongorora
Zhang anoti "Ndiri mune zvangu 40 uye ndave ndichiedza kurasikirwa nehumwe uremu. Kwemwedzi mumwe wekupedzisira ndakazviisa mumugwagwa wangu unotyisa, uye pamwe chete nekushanda kunze uye kudya zvakanaka, hazvina kundinyadzisa ini. Ndarasikirwa nezvose zvangu muviri wangu wechipfu, uye zvitanhatu zvangu zvakatanga kuratidza. Chimwe chinhu ndechekuti yakagadziriswa pamusoro pekuyeuka kwangu, kuongororwa uye ini zvino ndinokwanisa kutarisa kwemaawa. Ini zvino ndinokwanisa kushanda kwemaawa akawanda, uye vandinoshanda navo vanoti ini ndiri kubudirira zvikuru nhasi. Ini ndakagadzikana! "
Liu anoti "Ndinoshamiswa kuti zvakanaka sei chigadzirwa ichi. Zvinoshanda zviri nani kudarika zvandave ndichishandisa, uye handisi kumira chero nguva pfupi. Bhokisi rangu ne biceps zvinotarisa, uye muviri wangu unongonakidza. Simba rangu rinobudirira rinoonekwa mukati memavhiki ekushandisa. Ndaizoda kupa chigadzirwa ichi kune ani zvake anoda kuvandudza nesimba, uye ini ndichange ndakatenga zvakawanda. "
Sharlene anoti "Ndave nditsvaga chimwe chinhu chandibatsira kuti ndicheke huwandu kusvikira shamwari yangu ichangobva kundiraira kuti ndishandise izvi. Ndave ndichirovedza uye ndakagadzika kunwa uye handina kurasikirwa. Mushure mokunge ndakatanga kushandisa iyi ndakanga ndichinzwa mutsauko mukuru mukati mevhiki chete. Ndakatorera mapaundi makumi maviri, uye ndinonzwa zvakanaka ikozvino. Ndiri kukurumidza kupera zuva, uye munhu wose arikurovedza muviri anondibvunza ini zvandiri kushandisa. Izvi zvinhu zvinoshamisa, uye ndiri kuronga kuramba ndichichishandisa mukurema kwangu kurasikirwa rwendo. Uye o ini ndoda kuve ndakakanganwa, iri kuba kune mutengo zvakare. "
Pauro anoti "Ndanga ndichiri kushandisa chigadzirwa ichi kuti ndiwane musimba uye handigoni kunyunyutira. Zvandakaona ndezvokuti zvakaderedza osteoporosis yangu. Ndakanga ndakasiya mapiritsi, uye hapana chakasiyana pane zvandakanga ndichiita pane kutora izvi. Mapfupa angu zvino anonzwa akasimba kwazvo, uye ini ndinokwanisa ikozvino kudzidzisa kunze kwemabvi angu ndichinzwa marwadzo. Ndiri kurayira kune rimwe muvhiki inotevera. "
Yong anoti "Chiremba wangu akandikurudzira izvi nekuda kwepamusoro weperm count uye yaita zvishamiso. Iwe unoziva mazuva iwayo unonzwa sokuti haungatomboreri mwana wako uye iwe unoramba uchinzwa usina maturo. Ndakanga ndiripo, uye handigoni kutenda Testosterone Propionate (57-85-2) zvakakwana. Mukadzi wangu mwedzi wechinomwe ane pamuviri, iye zvino ini handigoni kumirira kuuya kwebasa redu remufaro. Kufara kwangu kwakadzoka nekuda kwechibereko ichi chinoshamisa. "
12. Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate. Ipi ester iri nani?
Itero steroid mbiri inenge yakangofanana chete iyo ine zvishoma zvishoma. Kana uri kutsvakurudza pa Testosterone Enanthate vs Testosterone Propionate, ndiri kukuudza kuti sei munhu angasarudza kutora Testosterone Enanthate kune Testosterone propionate uye pamwe chete.
Imwe misiyano pakati peiyi esters maviri ndeyekuti Testosterone Enanthate ister ester wakati imwe ifupi. Nokudaro, zvinogona kutora iwe nguva yakareba kuti uone kushanda kweTesttosterone Enanthate, zvichida mavhiki mana kusvika mashanu. Kune rumwe rutivi, nokuda kweTesttosterone Propionate iyo inokurumidza kuita, iwe unogona kuona kuitika kwayo mumavhiki maviri kusvika matatu.
Testosterone Propionate inogona kukonzera marwadzo epasi pajairo, uye chikamu ichocho chinogona kukurira. Ichi ndechokuti iyo ister ester uye ivo vanozivikanwa kuti vanokonzera chirwere chinonzi injection. Pane zvakasiyana, Testosterone Enanthate inonzi ester yakareba saka haigoni kukonzera marwadzo akawanda pajojo. Kana iwe usingakwanisi kutsungirira chirwere chinonzi injection post, iwe unofanira kuenda kuTesttosterone Enanthate.
Kune avo vanogadzira muviri vanofarira zvakaoma kuwana, vangangodaro vanoenda kuTesttosterone Propionate nokuti mishonga yayo inotarisa zvakaoma. Kana iri Testosterone Enanthate, mishonga inowanzochengetedza mvura yakawanda saka inogona kuonekwa seoma. Uyewo, zvakaoma mishonga inogara iripo nokusingaperi. Iwe unogona kuguma kurasikirwa nemisumbu yakakura nekuda kwekuchengetedza kwemvura.
Nezvemigumisiro yemigumisiro, Test e vs Test cyp side madhimoni zvinoenderana nechiyero icho chiyero ichi chinotendeuka ku estrogen. Iyo yakareba ester, inokurumidza kutendeuka uye saka Testosterone Propionate haingakupi zvishoma nyore nemigumisiro yakaoma kana ichienzaniswa neTesttosterone Enanthate. Muenzaniso wemigumisiro yakakomba iyo inouya nemakore mashoma esters is gynecomastia uye kana ukasarudza kutora Testosterone Enanthate, unorayirwa kutora Al kufanana naAromasyn, Arimidex, Arimistane.
Testosterone Enanthate hafu yeupenyu ndeyemazuva gumi uye inongoda kuti iitwe kaviri vhiki imwe neimwe. KwaTesttosterone Propionate, inorapwa kakawanda kwevhiki nega yega nokuti ine pfupi hafu yeupenyu.
Nezvizhinji zve-low-quality steroids zvinotengeswa mumusika, zvakanaka kuti uzive kwaunogona kutenga zvako steroid usingatengwi. Kuti urege kutenga zvigadzirwa zvako chete kuti uone kuti chinhu chakasiyana zvakasiyana uye chinongova nekodhi ye steroid inonzi ichitsigira kuti iwe unotenga kubva kune nzvimbo yakatendwa.
Munzvimbo yedu buyaas.com, unogona Tenga Testosterone Enanthate pasina kufunganya nezvekuwana izvo zvausina kutora. Iwe unogona zvakare Tenga Testosterone Propionate, uye ichagoverwa chaizvoizvo kwaunenge uchida. Kubudirira kwaro ndechokuti kana iwe iwe Tenga Testosterone Propionate online, hakuna mumwe munhu achaziva nyaya kubva pane zvaunowana. Havadi kuti vaite!
Ndezvipi zvakare zvaungave wakamirira? Raira kubva panzvimbo yedu nhasi uye uwane mutumbi iwoyo wawakagara uchishuva.